भावनालाई वस्तुगत जीवनवोधका आधारमा बुझेर परिचालन गरिएन भने मानिसले सत्य र असत्य, आफ्नो हित र अहित छुट्याउन सक्दैन। भावना बहकिन्छ। मानिसभित्र भ्रमका कुञ्जीहरू पूँजी बनेर झङ्कारित हुन पुग्दछन्। विकासलाई व्यापार गर्नेहरूले यस्ता मानवीय कमजोरीको उपयोग गरेर मानिसलाई थाहै नदिई दिग्भ्रमित पार्न सफल छन्। विकासको नियमको सत्य पक्षालाई बङ्ग्याई जान्ने सुन्ने हुनेखाने टाठाबाठा भनिएका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ र अभिमान पूरा गरेका छन्। यसरी मानिसले मानिसको भावना लुटेर आफ्नो फाइदाको व्यापार गरिरहेछन्।
टाठाबाठा र मै हूँ भन्नेहरुले जे भने त्यसैलाई कानुन सम्झेर, धर्म सम्झेर वा देववाणी सम्झेर कुनै पनि हालतमा पूरा गर्ने। आफू जे–जस्तो हालतमा छ, त्यो त्यही हालतमा रमाउने जस्ता प्रवृत्ति र प्रकृतिले गर्दा सभ्यताको उषाकालदेखि नै मानव समाज समतामूलक ढङ्गले विकास हुन सकेन। समाज जहिले पनि विभेदमा बाँच्यो। अत्याचार नै आचार बन्न पुग्यो। र मानिस पिछडा बन्न बाध्य भयो। मानिसमा दानवीय प्रवृत्ति मौलायो र भावना भड्किन पुग्यो।
आदिम समाजदेखि नै गण–मालिक, गाउँ–गाउँ थुम–थुमा राजा, रजौटा र तिनका प्रतिनिधिले निरिह मानवीय भावनामाथि खेलबाड गरे। जति अत्याचार गर्दा पनि विरोध गर्ने आँट पलाएन। आँट पलाएर संघर्ष गर्नेहरूको परिवार र वंशसम्म नष्ट गर्ने कार्य भयो। यसरी समाजभित्र भित्रिएको अन्याय अत्याचारले मानिसले आफूलाई बिर्सेर आफ्नो क्षमता भुलेर एउटा अवाक् जीवन जिउन बाध्य हुनुपर्‍यो। मानिसले नै मानिसलाई पशुतुल्य बन्न विवश तुल्यायो र उसको विवशताको व्यपार गर्‍यो।
संस्कृति–संस्कारलाई विश्व पूँजीवादी एकाधिकारवादले क्याप्चर गरेको छ। जनैपूर्णिमामा कुनै जातिले लगाउने धागो विश्व बजारबाट करोडौं मूल्यको आयत हुन्छ। भान्छामा प्रयोग हुने तेल, नुन, लसुन, प्याज, मसलादेखि लिएर लाउने कपडादेखि खाने चामलसमेत विश्व बजारबाट भित्रिन्छ। पूजा–आजाका लागि चल्ने वस्त्रदेखि लिएर धुप, बत्ती, अक्षता, फूल, चन्दनका साथै देवताका मूर्ति र चित्रहरू पनि विश्व बजारबाटै प्राप्त हुन्छ।
प्रहरीले गोदामका गोदाम छापा मार्‍यो। मुद्दा चल्यो। कहाँ चल्यो ? कसरी चल्यो ? कसले दण्ड पायो ? यो लुटको छुटमा राज्य कहाँ र कसरी रह्यो ? उसले चक्लेटको गुणस्तर देखेन। बालकको स्वास्थ्य र भविष्य देखेन। महङ्गोमा विष किन्न कसले बाध्य पार्‍यो ?